Maxkamadda Ciidamada Puntland oo sii-daysay 11 qof oo ku eedaysnaa Al-Shabaab[Sawirro+Cod] | SAHAN ONLINE
Maxkamadda Ciidamada Puntland oo sii-daysay 11 qof oo ku eedaysnaa Al-Shabaab[Sawirro+Cod]
BOOSAASO – Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta dib xoriyadoodii ugu soo celisay 11 qof oo lagu eedeeyey in ay ka tirsanaanyeen Ururka Al-Shabaab.
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada ee 5ta gobol Col. Cabdifataax Xaaji Aadan oo go’aanka ku dhawaaqay ayaa sheegay in maxkamadu ay ku payday wax iambi ah iyo ka ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab.
Maxkamada ciidamada Qalabka sida waxay u fariisatay dacwo ciqaaadeed lid ku ah 11 Eedaysane, kadib markii ay cadeeyeen hay’ada baarista Boliiska iyo xafiiska xeer ilaalintu cadeeyeen inay ku waayeen eedii loo haystay, kuwasoo ku eedaysnaa xeer L2, xeer L10 ee la dagaalanka argagixisada” ayuu yiri
Col. Cabdifataax Xaaji Aadan
Waxa uu sheegay in ragan dib ugu noqon karaan bulshada dhexdeeda xorna ay yihiin isla markaana aan looga baahneyn wax damaanad ah.
Qof kasta oo dambi lagu waayo maxkamadu waxay usoo celinaysaa xoriyadooda iyadoo wax damaanad ah iyo wax kale midna lahayn, qofkii dambi lagu helo sharciga la marinayaa ,cidna looga haybaysan mayo “ayuu yiri
Magacyada Ragga la sii-daayey ayaa kala ah
Liibaan Maxamed Maxamuud 20 jir ( Muqdisho).
Cabdullaahi Xasan Fiidow 30 jir ( Mahadaay).
Abuukar Cabdikarin Maxamed 21 jir(Jowhar).
Cabdiweli Maxamuud Cabdullahi 21 jir(Muqdisho).
Cabdikarim Maxamuud Cali 26 jir(Muqdisho).
Cabdisalaan Muuse 40 jir(Jowhar).
Muuse Cabdi Maxamuud 29 jir ( Jowhar).
Cabdinaasir Maxamed Maxamuud 29(Afgooye).
Maxamed Xasan Aweys 27 jir ( Muqdisho).
Maxamed Cawad Siciid (Boosaaso).
Siyaad Faarax Xuseen 19 jir ( Luuq)
Maxkamadda Ciidamada Puntland ayaa bishii March dil ku fulisay 5 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyey in ay ka tirsanaayeen Ururka Al-Shabaab kana dambeeyeen dilalka saddex sarkaal oo ka tirsanaa dowladda Puntland.